भ्रष्टाचार र घुसविरुद्ध लाग्न महाविर पुनको अपील
काठमाडौं। महाविर पुनले राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता गरेपनि भ्रष्टाचारमा कमी नआउनु दुःखद् भएको बताएका छन्। उनले भ्रष्टाचार र घुसखोरी प्रथालाई निर्मूल पार्न शासन व्यवस्था र शासकहरू बदलेर पनि भ्रष्टाचार उन्मूलन नहुनु दुःखद् भएको बताएका हुन्।
सामाजिक सञ्जालमा पुनले शासन व्यवस्था फेरिएपनि भ्रष्टाचार गर्ने संयन्त्रमा भने परिवर्तन नआएको उल्लेख गरेका छन्। भ्रष्टाचार उन्मूलनको नेतृत्व गर्ने नेताहरु नै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको उनको आरोप छ। भ्रष्टाचार एक रोग भएकोले यसको जरा नै उखेलेर फल्नु अहिलेको आवश्यकत भएको उनको भनाइ छ।
त्यकोलागि यसको मूल जरासम्म अध्यान र अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले बताए। भ्रष्टाचार र घुसविरुद्धका अभियानहरु पनि प्रभाव हिन रहेको पुनको बुझाइ छ। गहन अनुसन्धान गरेर मूल जरा उखेल्ने गरी भ्रष्टाचार र घुसविरुद्ध लाग्न अभियान्ताहरुलाई आग्रह समेत गरेका छन्। समाजिक सञ्जालमा उनले व्यक्त गरेको धारणा यस्तो छः
भ्रष्टाचार र घुसखोरी विरोधी अभियानमा लाग्नु भएकाहरूलाई सानो सुझाब:
म आफैले भ्रष्टाचार र घुसखोरी विरोधी अभियान चलाउन खोजेको छैन किन भने त्यस्तो अभियानहरू विभिन्न तरिकाले धेरै नेपालीहरू समूहहरूले चलाउनु भएको छ। नेपालमा किन यति साह्रै भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर साह्रै अचम्म लागेर त्यसको मूल कारण जान्न खोजेको मात्र हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्नेहरूले दिक्कै पारेका रहेछन्। त्यसैले उनले ‘घुस खान्या र घुस दिन्या लाई ठोक्नु पर्छ’ भनेर भनेका थिए।
भ्रष्टाचार र घुसखोरी प्रथालाई निर्मूल पार्नेको लागि शासन व्यवस्था र शासकहरू बदलेर हामीले धेरै पटक कोसिस गर्‍यौँ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीहरूलाई निर्मूल पार्न राणा शासन फाल्यौँ, पञ्चायती शासन फाल्यौँ, संवैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय शासन व्यवस्था फालेर संघीय शासन व्यवस्था ल्यायौँ। तर भ्रष्टाचार र घुसखोरी भन्ने सिस्टम त जस्ताको तस्तै छ यार। भ्रष्टाचार र घुसखोरी प्रथालाई निर्मूल नै पार्न विगतमा ज्यान फालेर लडेका नेता ज्यूहरूले नै बर्तमानमा देशको शासन चलाउनु भएको छ त। के भएको हो यो ऋषिमुनिहरु र बुद्धको देशमा ?
मेरो भनाई सुन्नुहोस्, यो भ्रष्टाचार र घुसखोरी भन्ने एउटा ठूलो रोग हो। कुनै पनि रोगको कारण हुन्छ। उदाहरणको लागी अहिले चलेको कोरोनाको प्रकोपको कारण भाइरस हो। हरेक रोगसहित कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न त्यसको जरा खोज्नु पर्छ र सो मूल जरालाई उखेली दियो भने मात्र त्यो समस्याको समाधान निस्कन्छ। एउटा रुखको मूल जरा चाहिँ जस्ताको तस्तै राख्ने र साना साना हाँगा बिँगा र पातहरू मात्र काट्ने गर्‍यो भने त्यो रुख कहिल्यै पनि मर्दैन।
मैले जान्न खोजेको र अनुसन्धान गर्न खोजेको त भ्रष्टाचारको मूल जरो के रहेछ भन्ने मात्र हो। भ्रष्टाचार र घुसखोरी भन्ने ठूलो रोगको मूल कारण के हो र त्यसलाई कसरी नास गर्नु पर्छ भन्ने कुराको पनि गहन अनुसन्धान गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ भन्ने मेरो ठम्याई हो। मैले गलत त भनेको छैन होला ? दुख लग्यो भने माफ गर्नु होला। धन्यवाद।